Know maara agba nke nje ndị a? - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Know maara agba nke nje ndị a?
Ejirila ihe ndị e ji esiji aja ndị e ji esiji akwa akwa kemgbe oge ochie. Site na narị afọ nke 19, ọnụ ala ma dị mfe ịme, ụdị ụcha dị iche iche ji nwayọọ nwayọọ na-agba ahịa.Ha ọ bụla, a machibidoro ụfọdụ ụdị anwụrụ anwụ n'ihi mmerụ ahụ na nsonyezụ mmadụ na-emetụta mmadụ.
Site na ndozi nke ndu mmadu, Ahụike na nchekwa gburugburu ebe obibi malitere ịkwanyere ugwu ugwu.Bacteria, fungi na microorganisms ndị ọzọ nwere ike imepụta ahịhịa ndị sitere n'okike n'ụzọ siri ike site gbaa ụka na ọdịbendị, nke a na-ahụta ka ọ bụrụ otu n’ime isi mmalite nke anya mmiri nke nwere ike dochie anya dyes. N’oge na-adịbeghị anya, beengwọ ya na ntinye ya na akwa akwa akwawola ntị na anya.
Na mgbakwunye, Enwere ike gbanwee ụdị ntutu dị iche iche nke agba sitere na okike site na microorganism site na iji nweta ụdị dị iche iche., ụfọdụ microbial anthraquinone nwekwara ụfọdụ ọgwụ nje, ma nwee ezigbo ntinye n'ọrụ na njikwa akwa.
Colorcha nke nje na-eji ihe microorganisms emechiri
Bacillus na-acha odo odo: acha anụnụ anụnụ na odo odo
Udiri anụnụ anụnụ na-adịghị ahụkebe n'ihi na obere microorganisms dị n'ụwa na-emepụta ha 1997, a kọrọ na nje na-amịpụta nje na-acha odo odo na odo na-acha odo odo na Japan. Nje a sitere na silk ndị emetụtara: kewapụrụ silk ahụ mgbe a hapụrụ ya n'ụkwụ, ufodu nke silk achawara acha odo odo na odo odo, wee jiri ọgwụ Tetrahydrofuran nke ahịhịa mee ihe iji wepụta ụcha na nje ndị ahụ., ọ dịkwa mma maka ịmịchasị ajị anụ ndị dị ka silk, ajị anụ na owu.
Fọdụ ndị ọrụ nyochapụrụ ọdịiche nke vibrio, nke nwere ike imepụta ihe na-acha uhie uhie, site na mmiri osimiri, ma jiri ihe na-esi na ya apụta na-acha ajị anụ, naịlọn, silk na akwa ndi ozo.Beroterial omenala: mbụ, otu chịm na ọkara mmiri mmiri (SBRM) A na-etinye n'ime AGAR n'ime ite a na-eji sọks SBRM nwere mmiri dị n'ime ya, na omenaala a rụrụ na shaker na 30 Jiri ọsọ nke 200 r / min maka 12 h, ma emesịa gbasaa omenaala. Mgbe nke ahụ mechara, Ejiri sachtidium dị ọcha site na mkpocha, ịta, ngbaghari na usoro ndi ozo, emesia enwetara Clostridium.
Agba nke ero ero nke umu ihe na egbu
Aspergillus Niger sporangium ntụ ntụ: enwere ike idozi agba
Aspergillus Niger bụ aspergillus fungus na-ekesasị n'ọtụtụ ọka, ikuku na ala. omefọdụ ndị na-eme nchọpụta ji glucose nduku jiri mmiri ọkụ, ma tinye ụfọdụ ala agwakọtara agwakọta na aspergillus Niger spore ntụ dị ka nsị nke unye, wee tinye akwa silk igba ogwu maka dyeing.The agba na luster nke akwa dyed nwere ike gbanwee site na ịchịkwa mgbakwunye nke sporangia ntụ ntụ..
Aspergillus: red, odo odo, oroma, odo
Red aspergillus nwere ike iwepụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ezumike monascus pigments, nke tumadi nwere 6 ụdị mmanya na-egbu egbu na 4 ụdị mmiri na-agbanye mmiri, gụnyere agba uhie, odo odo, Ndị na-acha odo odo na agba odo na-acha odo odo.Researchers na-eji aspergillus uhie na-acha ọbara ọbara na-acha ọcha na-acha ọcha, usoro a kapịrị ọnụ bụ: ga-azụlite ezigbo ọgwụ mgbochi ọrịa aspergillus na-ajụ ajụ, na 28 ~ 30 Na-agbasawanye dị ka omenala agụmakwụkwọ, mgbe agbakwunyela ụwa adịkarịghị ka ala, ka obere okpomoku nke akwa silk mgbe ogwugwo ya, fastgba akwa ngwa ngwa eji eme ihe nwere ike nweta ihe achọrọ.
Fusarium oxysporum: odo odo odo
Speciesdị ise nke fusarium oxysporum dịpụrụ adịpụ na osisi citrus nke nje na-akpata, A na-enyocha eriri nke nwere ike imepụta ụcha pink anthraquinone ma mee ka ọ dị ka ọsịchasị nke akwa ajị anụ., mana ọ dịkwa ngwa ngwa agba dị elu.
Cordyceps sinensis: 6 ụdị uhie
Cordyceps sinensis BCC1869 bụ ero na-akpata ahụhụ, nke nwere ike imeputa udiri udiri uhie naphthoquinones nwere kemikal yiri nke azụmahịa na-acha uhie uhie shikonin na vermonin.Studies egosiwo na naphthoquinones nwere mmekọrịta site na cordyceps sinensis nwere nkwụsi ike dị elu na nkwụsi ike acid-base na ihe ndị na-egbochi nje ihe. Ya mere, cordyceps sinensis BCC1869, dika aji uhie, nwere ezigbo ngwa ngwa bara uru maka ihichasị na ịcha akwa. Otú ọ dị, Enweghị akụkọ dị mkpa banyere ịbanye na ya ugbu a.
Ọnwụ onu ngwa nke | elu-tech eriri ihe na ubi nke ọgwụ ngwa